Maalinta caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka oo laga xusay Muqdisho+Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Maalinta caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka oo laga xusay Muqdisho+Sawirro
By Daahir Aadan / December 10, 2019 December 10, 2019
Munaasabad lagu xusayay Maalinta Caalamiga ee Xaquuqul Aadanaha ee ku beegan 10-ka December Maanta oo kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho,waxaana soo qaban qaabisay Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Aadanaha.
Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qeybgalay Mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya,waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ruwaayado iyo Suugaan ka turjumaysay muhiimadda ay leedahay Xaquuqul Insaanka .
Guddoomiyaha Hay'adda Golaha Naafadda Qaranka Sayid Cali Cabdullaahi iyo Agaasimaha Naafadda gobolka Banaadir Axmed Xasan ayaa waxay uga mahad celiyeen Wasaaradda Haweenka si ay u garab taagan tahay dadka Naafada ah,iyagoona Wasaaradda ka codsaday iney sii xoojiso ka warqabka dadka Naafada ah iyo sidii waxbarasho iyo shaqo loogu heli lahaa.
Canab Xasan Cilmi iyo Faadumo Gariin oo ka kala tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dheeraaday arrimo badan oo ku saabsan dacadiyada ay la kulmaan Haweenka iyo sidii Haweenka Soomaaliyeed qeyb kaga noqon lahaayeen siyaasadda dalka.
Ugu dambeyntii,Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuql Insaanka Deeqo Yaasi Xaaji ayaa sheegay in Wasaaraddu ay ka shaqeyneyso sharciga xadidiya joojinta dhibaayooyinka ay la kulmaan Bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sidii loo meel marin lahaa sharcigaas ee ay diyaarisay Wasaaradda.